“ဘုရားဘယ်ရောက်နေလဲ” လို့ မေးဖူးပါသလား? ဘုရားသခင်အပေါ် သင် အတိအကျမှီခိုနိုင်တာ ဘာရှိလဲ?
ဘုရားသခင် ကျနော်တို့နဲ့အတူရှိတယ်လို့ ဘယ်အတိုင်းအတာအထိ စိတ်ချတည်မှီနိုင်မလဲ? ကပ်ဘေးဆိုက်ရောက်တဲ့ကာလတွေမှာရော တည်ငြိမ်အေးချမ်းတဲ့ကာလတွေမှာရော... သူဟာ ကျနော်တို့ ခိုလှုံဆည်းကပ်နိုင်တဲ့သူကော အမှန်တကယ် ဟုတ်ပါရဲ့လား?
ဘုရားသခင်ဟာ ကျနော်တို့သူ့ကိုသိဖို့ရာ အလိုတော်ရှိတဲ့ စကြာဝဠာတစ်ခုလုံးကိုဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့သူဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျနော်တို့အားလုံး ဒီလောကမှာအသက်ရှင်ရတာဖြစ်တယ်။ သူ့ရဲ့ဆန္ဒက- ကျနော်တို့ သူ့အပေါ်မှီတွယ်ပြီးတော့ သူ့ရဲ့ ခွန််အား၊ မေတ္တာ၊ တရားမျှတမှု၊ ဖြူစင်မြင့်မြတ်ခြင်းနဲ့ ကရုဏာတော်တို့ကို တွေ့ကြုံခံစားစေချင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူက အလိုရှိသူတိုင်းကို “ငါ့ထံသို့လာကြလော့” လို့ ပြောနေပါတယ်။
လူသားတွေနဲ့မတူတဲ့ ဘုရားသခင်ဟာ မနက်ဖြန်မှာ၊ နောက်ပတ်မှာ၊ နောက်နှစ်မှာ၊ နောက်ဆယ်စုနှစ်မှာ ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာကို သိပါတယ်။ သူက “ရှေးကာလ၌ဖြစ်ဖူးသောအမှု့အရာတို့ကို အောက်မေ့ကြလော့။ ငါသည် ဘုရားသခင်ဖြစ်၏။ ငါမှတပါး အခြားသောဘုရားမရှိ။”၁ လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒီကမ္ဘာမှာ ဘာဖြစ်မယ်ဆိုတာ သူသိတယ်။ ပိုအရေးကြီးတာက- သင့်ဘဝမှာ ဘာဖြစ်ပျက်မယ်ဆိုတာသိပြီးတော့၊ သင်သာ သင့်ဘဝထဲမှာ ပါဝင်ခွင့်ပြုမယ်ဆိုရင် သင့်အတွက် ရပ်တည်နေနိုင်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်က သူဟာ “ငါတို့ ခိုလှုံရာဖြစ်၍ ခွန်အားကိုပေးတော်မူ၏။ ဘေးရောက်သည့်ကာလ အထူးသဖြင့် ကူမတော်မူကြောင်း ထင်ရှားတော်မူ၏။”၂ လို့ ကတိပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့က သူ့ကိုတွေ့ဖို့ ပြင်းပြတဲ့နှလုံးသားနဲ့ ရှာရပါမယ်။ သူက “ငါ့ကိုရှာသောအခါ စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့နှင့်ရှာလျှင် တွေ့ကြလိမ့်မည်။”၃ လို့ ပြောပါတယ်။
ဘုရားကိုသိတဲ့လူတွေဟာ ခက်ခဲဆိုးယုတ်တဲ့ကာလတွေကနေ လွတ်မြောက်မယ်ဆိုတာတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ မလွတ်မြောက်ပါဘူး။ အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုကြောင့် ဒုက္ခတွေ၊ သေကြေပျက်စီးမှုတွေ ဖြစ်ပွားစေတဲ့အခါမှာ ဘုရားကိုသိတဲ့လူတွေလည်း အဲဒီထဲမှာပါမှာပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဘုရားရဲ့အတူရှိနေခြင်းက ငြိမ်သက်ခြင်းနဲ့ ခွန်အားကိုပေးပါတယ်။ ယေရှုခရစ်တော်နောက်လိုက်တစ်ဦးက ဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ်- “ငါတို့သည် အမျိုးမျိုးသောနှောင့်ယှက်ခြင်းကို ခံရသော်လည်း၊ အကျိုးနည်းခြင်းသို့မရောက်။ မကြံစည်နိုင်အောင် ရှိသော်လည်း စိတ်မပျက်။ ညှင်းဆဲခြင်းကိုခံရသော်လည်း ရှုံးခြင်းမရှိ၊ အောက်သို့လှဲခြင်းကိုခံရသော်လည်း ဆုံးရာသို့မရောက်။”၄ လို့ ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ အမှန်တရားက ဘဝမှာ ပြဿနာတွေကြုံတွေ့ရမယ်ဆိုတာကုုိ ပြသပါတယ်။ ဒါပေမယ်လို့ ဘုရားသခင်ကိုသိရှိပြီး ပြဿနာတွေကိုရင်ဆိုင်မယ်ဆိုရင် တမူထူးခြားတဲ့အမြင်မျိုးနဲ့ ဘုရားဆီကလာတဲ့ခွန်အားအားဖြင့် တုံ့ပြန်နိုင်ပါတယ်။ ဘယ်ပြဿနာကမှ ဘုရားမဖြေရှင်းနိုင်လောက်တဲ့ စွမ်းအားမရှိပါဘူး။ သူဟာ ကျနော်တို့ကို ရိုက်ခတ်နိုင်တဲ့ပြဿနာတွေ အားလုံးထက်ကြီးမားပါတယ်။ ပြီးတော့ ဒါတွေကိုတစ်ဦးတည်း ရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းဖို့လည်း ချန်မထားပါဘူး။
ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်က ကျနော်တို့ကို “ထာဝရဘုရားသည် ကောင်းတော်မူ၏။ အမှုရောက်သောအခါ ရဲတိုက်ဖြစ်တော်မူ၏။ ခိုလှုံသောသူတို့ကို သိမှတ်တော်မူ၏။”၅ လို့ ပြောပြပါတယ်။ ပြီးတော့ “ထာဝရဘုရားသည် ပဌနာပြုသောသူအပေါင်း၊ သစ္စာနှင့်တကွ ပဌနာပြုသောသူအပေါင်းတို့၏ အနီးအပါး၌ ရှိတော်မူ၏။ ကြောက်ရွံ့သောသူတို့၏အလိုကို ပြည့်စေတော်မူ၏။ ထိုသူတို့၏ အော်ဟစ်ခြင်းကိုကြား၍ ကယ်တင်တော်မူ၏။”၆ လို့လည်း ပြောထားပါတယ်။
ယေရှုခရစ်တော်က သူ့ရဲ့နောက်လိုက်များကို ဒီလို နှစ်သိမ့်မှုပေးတဲ့စကားတွေကို ပြောခဲ့ပါတယ်- “စာငှက်နှစ်ကောင်ကို အဿရိတစ်ပြားအဖိုးနှင့် ဝယ်ရသည်မဟုတ်လော။ သင်တို့အဘ အခွင့်မရှိလျှင် ထိုစာငှက်တစ်ကောင်မျှ မြေသို့မကျရ။ သင်တို့ဆံပင်သည်လည်း အကုန်အစင် ရေတွက်လျက်ရှိ၏။ ထို့ကြောင့် မကြောက်ကြနှင့်။ သင်တို့သည် စာငှက်အများတို့ထက် သာ၍မြတ်ကြ၏။”၇ လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ သင် အမှန်တကယ် ဘုရားကိုကိုးစားမယ်ဆိုရင် သူဟာ သင့်ကို ဘယ်သူနဲ့မှမတူ ဂရုစိုက်ပါလိမ့်မယ်။ ဘယ်သူမှမလုပ်ပေးနိုင်တဲ့ နည်းအားဖြင့်ပေါ့။
ဘုရားသခင်ဟာ လူသားတွေကို ရွေးချယ်နိုင်စွမ်းနဲ့အတူ ဖန်ဆင်းတာဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာက- ကျနော်တို့ဟာ သူနဲ့ဆက်သွယ်မှုပြုဖို့ အတင်းအကျပ်မတိုက်တွန်းပါဘူး။ ကျနော်တို့ကို သူ့ကိုငြင်းပယ်ဖို့နဲ့ အခြား ဆိုးယုတ်တဲ့အမှုတွေပြုဖို့ ခွင့်ပြုထားပါတယ်။ ကျနော်တို့ကို ကြင်နာတတ်အောင် အတင်းလုပ်နိုင်တယ်။ ကောင်းအောင်လည်း အတင်းလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲလိုသာဆိုရင် သူနဲ့ကျွမ်းဝင်ဆက်သွယ်မှုဟာ ဘယ်လိုဆက်သွယ်မှုမျိုး ဖြစ်သွားမလဲ? အဲဒါ ဆက်သွယ်မှု လုံးလုံးမဟုတ်တော့ဘူး။ အတင်းအကျပ်ခိုင်းပြီး ထိန်းချုပ်ထားတဲ့ နာခံမှုသာဖြစ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီအစား ကျနော်တို့ကို လွတ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတဲ့ လူသားဂုဏ်သိက္ခာပေးပါတယ်။
သဘာဝအလျောက် ကျနော်တို့ဟာ စိတ်ဝိညာဉ်အတွင်းကနေ ငိုယိုမြည်တမ်းကြပါတယ်.. “အောင်မလေး၊ ဘုရား။ ဘာကြောင့်များ ဒီလောက်ကြီးမားတဲ့အရာကို ကျွန်တော်/ကျွန်မပေါ် ကျရောက်စေတာလဲ?”
ကျနော်တို့က ဘုရားကို ဘာလုပ်စေချင်တာလဲ? လူတွေရဲ့အမှုအရာတွေကို ထိန်းချုပ်စေချင်တာလား? အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ ဘုရားသခင်အနေနဲ့ အသေအပျောက် ဘယ်နှစ်ယောက်များများအထိ လက်ခံနိုင်ဖို့ ခန့်မှန်းတာလဲ?! တကယ်လို့ ဘုရားက ရာဂဏန်းလောက်ပဲ သေဖို့ခွင့်ပြုတယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ခံစားရသက်သာမှာလား? ဒါပေမယ့် ဘုရားက တစ်ယောက်တောင် အသတ်မခံရဖို့ တားဆီးမယ်ဆိုရင်လည်း လူသားတွေရဲ့ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ဆိုတာ မရှိပြန်တော့ဘူး။ လူတွေကသာ ဘုရားကိုလျစ်လျူရှုဖို့၊ ဖီဆန်ဖို့၊ ကိုယ့်လမ်းကိုယ်သွားပြီးတော့ အခြားသူများအပေါ် ကြောက်မယ်ဖွယ် အပြုအမူတွေပြုလုပ်ဖို့ ရွေးချယ်ကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကမ္ဘာမြေဟာ လုံခြုံတဲ့နေရာမဟုတ်ပါဘူး။ တစ်ယောက်ယောက်က ကျနော်တို့ကို သေနတ်နဲ့ပစ်နိုင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် ကျွန်တော်တို့ ကားနဲ့အတိုက်ခံရနိုင်တယ်။ ဒါမှမဟုတ် အကြမ်းဖက်သူတွေတိုက်ခိုက်တဲ့့ အဆောက်အဦးကြီးထဲကနေ ကျွန်တော်တို့ ခုန်ထွက်ရင်ထွက်ရမယ်။ မဟုတ်ရင်လည်း ကမ္ဘာမြေကြီးလို့ခေါ်တဲ့ ဒီ ကြမ်းတမ်းရုန့်ရင်းတဲ့လောကမှာ ဘယ်အရာမဆိုဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော် အစဉ်လိုက်နာခြင်း မရှိတဲ့အရပ်လေ။ ဒါတောင် ဘုရားဟာ လူတွေရဲ့သနားညှာတာမှုမရပါဘူး။ လူတွေသာ ဘုရားရဲ့သနားညှာတာမှုကိုရတာပါ။ “မိုဃ်းကောင်းကင်မျက်နှာကျက်၌ အလင်းအိမ်တည်စေ”၈ လို့ နှုတ်ထွက်တော်နဲ့ပဲ မရေမတွက်နိုင်တဲ့ကြယ်တွေပြည့်နှက်တဲ့စကြာဝဠာကြီးကို ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့ဘုရားပါ။ “လူမျိုးတို့တွင် စိုးစံတော်မူ”၉ တဲ့ ဘုရားဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ တန်ခိုးတော်နဲ့ ဉာဏ်ပညာအရာမှာ အနှိုင်းဆမဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြဿနာတွေဟာ မကျော်လွှားနိုင်ဘူးထင်ရပေမယ့် “ငါထာဝရဘုရားသည် ခပ်သိမ်းသောသတ္တဝါတို့ကို အစိုးရသောဘုရားသခင်ဖြစ်၏။ ငါမတတ်နိုင်သောအရာ တစုံတခုရှိလိမ့်မည်လော။”၁၀ လို့ သတိပေးတဲ့၊ အံ့သြဖွယ် တတ်စွမ်းတဲ့ဘုရား ကျနော်တို့မှာရှိပါတယ်။ သူဟာ အပြစ်ရှိသောလူသားများရဲ့လွတ်လပ်ခွင့်ကိုတော့ စောင့်ထိန်းပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာ သူ့အလိုတော်ကိုပဲ ဖြစ်ပေါ်စေပါတယ်။ ဘုရားသခင်က “ငါသည် နှုတ်ထွက်အတိုင်းပြုမည်။ ကြံသည်အတိုင်း စီရင်မည်။”၁၁ လို့ ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတော့ ကျနော်တို့အသက်တာကို သူ့ထံမှာအပ်နှံထားတယ်ဆိုရင် အဲဒီကနေ ကျနော်တို့ နှစ်သိမ့်မှုကိုရယူနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ “ထောင်လွှားစော်ကားသောသူတို့ကို ဘုရားသခင် ဆီးတားတော်မူ၏။ စိတ်နှိမ့်ချသောသူတို့အား ကျေးဇူးပြုတော်မူ၏ဟု လာသတည်း။”၁၂
ကျနော်တို့လူတော်တော်များများက -- မဟုတ်သေးဘူး၊ ကျနော်တို့အားလုံးက -- တခါတလေ ဘုရားနဲ့သူ့နည်းလမ်းတွေကို တမင်တွန်းထုတ်တတ်ကြပါတယ်။ အခြားလူများနဲ့နှိုင်းယှဉ်ရင်၊ အထူးသဖြင့် အကြမ်းဖက်သူများနဲ့စာကြည့်ရင်၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လေးစားလောက်စရာ၊ ကြင်နာတတ်တဲ့လူတွေလို့ ထင်ကောင်းထင်ကြမှာပဲ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့နှလုံးသားထဲကနေ ပကတိ အရှိကိုအရှိတိုင်း ဘုရားကိုမျက်နှာချင်းဆိုင်ကြမယ်ဆိုရင် ကိုယ့်အပြစ်တွေကို အလိုလိုသိနားလည်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ကို ဆုတောင်းခြင်းနဲ့ စ, စကားပြောတဲ့အခါမှာ ကျနော်တို့အကြံအစည်တွေ၊ အပြုအမူတွေနဲ့အတ္တတွေကို ဘုရားကောင်းကောင်းသိတယ် ဆိုတဲ့ခံစားမှုနဲ့ ကျနော်တို့ ခဏတုံ့ဆိုင်းပြီးတော့ ဆုတောင်းဖို့ရာအခွင့်မသာသလိုဖြစ်ကြတယ်မဟုတ်လား? ကျနော်တို့ရဲ့အသက်တာတွေနဲ့ အပြုအမူတွေအားဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကို ဘုရားဆီကနေ ဝေးကွာစေခဲ့ကြပါတယ်။ ဘုရားမပါဘဲ ကိုယ့်ဘဝကိုယ်မောင်းနှင်လို့လည်း ကိစ္စမရှိတဲ့ပုံစံနဲ့ ကျနော်တို့ မကြာခဏ အသက်ရှင်ခဲ့ကြပါတယ်။ သမ္မာကျမ်းစာက “ငါတို့ရှိသမျှသည် သိုးကဲ့သို့လမ်းလွဲလျက်၊ ကိုယ်လမ်းသို့အသီးသီး လိုက်သွားကြသည်”၁၃ လို့ ပြောပါတယ်။
အကျိုးဆက်တွေကကော? ကျနော်တို့အပြစ်တွေက ဘုရားဆီကနေ ကင်းကွာစေပါတယ်။ ပြီးတော့ အပြစ်က ယခုဘဝထက်မက ထိခိုက်စေပါတယ်။ ကျနော်တို့အပြစ်တွေအတွက် အဖိုးအခကတော့ သေခြင်း (ဝါ) ဘုရားထံမှ ထာဝရကင်းကွာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ ခွင့်လွှတ်ခံရပြီးသူ့ကိုသိဖို့ရန် ဘုရားသခင်က လမ်းတစ်လမ်း ပြင်ဆင်ပေးပါတယ်။
ဘုရားဟာ ကျနော်တို့ကိုကယ်ဆယ်ဖို့ ကမ္ဘာမြေကြီးကို ကြွလာခဲ့ပါတယ်။ “ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည် ပျက်စီးခြင်းသို့မရောက်၊ ထာဝရအသက်ကိုရစေခြင်းငှာ၊ ထာဝရဘုရားသခင်သည် မိမိ၌တစ်ပါးတည်းသောသားတော်ကို စွန့်တော်မူသည်တိုင်အောင် လောကီသားတို့ကို ချစ်တော်မူ၏။ လောကီသားတို့အား အပြစ်စီရင်ခြင်းငှာ၊ ဘုရားသခင်သည် သားတော်ကို ဤလောကသို့စေလွှတ်တော်မူသည်မဟုတ်။ လောကီသားတို့သည် ကိုယ်တော်အားဖြင့် ကယ်တင်ခြင်းသို့ ရောက်မည်အကြောင်း စေလွှတ်တော်မူ၏။”၁၄
ဘုရားသခင်က ကျနော်တို့ ဒီကမ္ဘာမှာတွေ့ကြုံရတဲ့ နာကျင်မှုနဲ့ဒုက္ခတွေကို သိမှတ်တော်မူပါတယ်။ ယေရှုဟာ သူ့အိမ်တော်ရဲ့ဘေးကင်းမှုနဲ့လုံခြုံမှုတွေကို စွန့်တော်မူပြီး ကျနော်တို့နေထိုင်တဲ့ ခက်ခဲကြမ်းတမ်းတဲ့လောကကို ဆင်းကြွခဲ့တာပါ။ ယေရှုဟာ မောပန်းခဲ့တယ်၊ ဆာလောင်ငတ်မွတ်ခြင်းကိုလည်းကြုံတွေ့ခဲ့တယ်၊ လူတွေရဲ့ ပြစ်တင်စွပ်စွဲမှုတွေကို ရင်ဆိုင်ခဲ့တယ်၊ မိသားစုနဲ့အပေါင်းအပါများရဲ့ ဝိုင်းပယ်ထားခြင်းကိုလည်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်ဆို ယေရှုဟာ နေ့တဓူဝအခက်အခဲတွေထက် ပိုမိုတွေ့ကြုံခံစားခဲ့တာပါ။ လူသားဇာတိခံယူတဲ့ ဘုရားရဲ့သားတော်၊ ယေရှုဟာ ကျနော်တို့အပြစ်တွေအားလုံးကို သူ့အပေါ်ယူတင်ခဲ့ပြီးတော့ ကျနော်တို့ရဲ့ သေခြင်းပြစ်ဒဏ်ကို ပေးဆပ်ခဲ့ပါတယ်။ “ခရစ်တော်သည် ငါတို့အဘို့အလိုငှာ အသက်တော်ကို စွန့်တော်မူသည်အရာကို ငါတို့သည်ထောက်၍၊ မေတ္တာတော်ကိုသိရကြပြီ။”၁၅ သူဟာ ကျနော်တို့ ခွင့်လွှတ်ခြင်းခံရဖို့အတွက် ညှင်းပန်းနှိပ်စက်မှုကိုခံရပြီးနောက် လက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်မှာ သိမ်ငယ်နှိမ့်ချစွာ အသက်ရှူကျပ်လျက် အသက်တော်ကိုစွန့်ခဲ့ရပါတယ်။
ယေရှုဟာ သူ အသေသတ်ခြင်းခံရမယ်ဆိုတာ အခြားသူတွေဆီမှာ ကြိုပြောထားပြီးဖြစ်ပါတယ်။ သေလွန်ပြီး သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာ အသက်ပြန်ရှင်လာမယ်လို့ ပြောခဲ့ပါတယ်။ ဒါ သူဟာဘုရားဖြစ်တယ်ဆိုတာ သက်သေပြတာပါပဲ။ သူ တစ်နေ့ လူပြန်ဝင်စားလာမယ်လို့ မပြောခဲ့ပါဘူး။ (အဲဒီလိုလုပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်တောင် ဘယ်သူကသိနိုင်မှာလဲ?) သူကမြေမြှုပ် သင်္ဂြ ိုလ် ခြင်းခံရပြီး သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာ သူ အသေသတ်ခံရတာကို မြင်တွေ့ခဲ့တဲ့သူတွေရှေ့မှာ ကိုယ်တိုင် မိမိခန္ဓာကိုယ်ရှင်လျက်နဲ့ ပြသမယ်လို့ ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ သုံးရက်မြောက်တဲ့နေ့မှာတော့ သူ့ ဂူဗိမာန်တော်ကို ဗလာကျင်းတွေ့ရပြီး လူပေါင်များစွာတို့က သူ့ကိုရှင်လျက်နဲ့ ပြန်တွေ့တယ်ဆိုတာကို သက်သေခံပြောကြားခဲ့ကြပါတယ်။
ဘုရားက သူနဲ့အတူကောင်းကင်နိုင်ငံမှာ အတူစိုးစံဖို့ဖိတ်ခေါ်နေပါတယ်
သူ အခု ကျနော်တို့ကို ထာဝရအသက်ပေးပါတယ်။ ကျနော်တို့ထိုက်တန်လို့ရတာ မဟုတ်ပါဘူး။ အဲဒါ ကျနော်တို့ကိုပေးအပ်တဲ့ ဘုရားဆီကဆုကျေးဇူးပဲဖြစ်ပါတယ်။ “ဘုရားသခင်ပေးတော်မူသော ဆုကျေးဇူးတော်ကား၊ ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်အားဖြင့် ထာဝရအသက်ပေတည်း။”၁၆ ကျနော်တို့အပြစ်ကို နောင်တရပြီး ဘုရားဆီပြန်လှည့်မယ်ဆိုရင် ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့် ထာဝရအသက်ဆုကျေးဇူးကို ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒါ ရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးပါ။ “ဘုရားသခင်သည် ငါတို့အား ထာဝရအသက်ကို ပေးတော်မူ၍၊ ထိုအသက်သည်လည်း သားတော်၌ပါ၏။ ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို မရသောသူမူကား အသက်ကိုမရ။”၁၇ သူဟာ ကျနော်တို့အသက်တာထဲကို ဝင်ရောက်လာချင်ပါတယ်။
ကောင်းကင်ဘုံဆိုတာကကော? ကျမ်းစာက ဘုရားဟာ “လူစိတ်နှလုံးကို အနန္တကာလ၌ စွဲလန်းစေတော်မူပြီ”၁၈ လို့ ဆိုထားပါတယ်။ အဲဒါ ကျနော်တို့နှလုံးသားထဲမှာ ပိုမိုလှပပြည့်စုံတဲ့ကမ္ဘာဟာဘယ်လိုပုံစံဖြစ်မလဲဆိုတာကို ကျနော်တို့သိနေတယ်လို့ဆိုလိုတာ ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့ချစ်တဲ့သူတွေ သေဆုံးသွားရခြင်းက ဒီဘဝနဲ့ဒီကမ္ဘာဟာ တစ်ခုခုတော့လုံးဝမှားယွင်းနေတယ်ဆိုတာကို လက်ခံစေပါတယ်။ ကျနော်တို့ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်က အသည်းနင့်ဖွယ်ရာအခက်အခဲတွေနဲ့ နာကျင်မှုတွေကနေလွတ်မြောက်တဲ့၊ ပိုကောင်းတဲ့နေရာတစ်နေရာရှိနေရမယ်ဆိုတာ သိနေပါတယ်။ ဘုရားသခင်ဆီမှာ ကျနော်တို့ကိုပေးအပ်တဲ့ ပိုကောင်းတဲ့တစ်နေရာရှိပါတယ်။ သူ့အလိုတော်အစဉ်ပြည့်စုံမယ့် အဲဒီနေရာမှာ လုံးလုံးလျားလျား တမူထူးခြားတဲ့စနစ်တွေ ရှိပါလိမ့်မယ်။ အဲဒီကမ္ဘာမှာ လူတွေရဲ့မျက်စိက ရှိသမျှ မျက်ရည်တွေအားလုံးကို ဘုရားသခင်သုတ်ပေးတော်မူလိမ့်မယ်။ အဲဒီမှာတော့ နောက်ထပ် မြည်တမ်းခြင်း၊ ငိုကြွေးခြင်း၊ သေဆုံးခြင်း၊ ဒါမှမဟုတ် နာကျင်ခြင်း မရှိတော့ပါဘူး။၁၉ ပြီးတော့ ဘုရားသခင်ဟာ သူ့ဝိညာဉ်တော်အားဖြင့် လူတွေထဲမှာကိန်းအောင်းတဲ့အတွက် လူတွေဟာ ဘယ်တော့မှ အပြစ်ထပ်မပြုတော့ပါဘူး။၂၀
အကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်မှုအဖြစ်တွေဟာ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းလွန်းပါတယ်။ ယေရှုပေးကမ်းတဲ့ ဘုရားနဲ့ထာဝရဆက်သွယ်မှုကို ငြင်းပယ်ခြင်းဟာ ပိုတောင်ဆိုးပါလိမ့်မယ်။ ထာဝရအသက်အတွက်မဆိုထား၊ ဒီဘဝမှာ ဘုရားကိုသိခြင်းနဲ့ယှဉ်တဲ့ ဆက်သွယ်မှုဆိုတာမရှိတော့ဘူးလေ။ သူဟာ ကျနော်တို့ဘဝရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်၊ နှစ်သိမ့်မှုအရင်းအမြစ်၊ စိတ်ရှုပ်ထွေးသောအချိန်တွေမှာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဉာဏ်ပညာ၊ ကျနော်တို့ရဲ့ခွန်အားနဲ့ မျှော်လင့်ချက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ “ထာဝရဘုရားသည် ကောင်းမြတ်တော်မူသည်အကြောင်းကို မြည်းစမ်း၍သိမှတ်ကြလော့။ ကိုယ်တော်ကိုခိုလှုံသောသူသည် မင်္ဂလာရှိ၏။”၂၁
ကျနော့်ကိုတစ်ချို့ကပြောတယ်၊ ဘုရားဟာ အထောက်အကူသာဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် ဘုရားဟာ တစ်ဦးတည်းသောစိတ်ချမှီခိုနိုင်စရာပဲဖြစ်တယ်လို့ ယုံကြည််ပါတယ်။
ယေရှုက “ငြိမ်သက်ခြင်းကို သင်တို့၌ ငါထားခဲ့၏။ ငါ၏ငြိမ်သက်ခြင်းကို သင်တို့အားငါပေး၏။ လောကီသားတို့ ပေးသကဲ့သို့ ငါပေးသည်မဟုတ်။ သင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်း၊ စိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်း မရှိစေနှင့်။”၂၂ ယေရှုက သူ့ကိုယုံကြည်ကိုးစားတဲ့လူတွေရဲ့အသက်တာဟာ ကျောက်ပေါ်မှာတည်ဆောက်ထားတာနဲ့တူတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ ဒီဘဝမှာ ဘယ်လိုဘေးဒုက္ခက ကိုယ့်ကိုတိုက်ခိုက်တိုက်ခိုက် ယေရှုကကြံ့ခိုင်စေနိုင်ပါတယ်။
ဘုရားသခင်ဘယ်မှာလဲ? သူ သင့်အသက်တာထဲကို ဝင်ရောက်လာနိုင်ပါတယ်။
ယေရှုကို အခုပင် သင့်အသက်တာထဲကို ခေါ်ဖိတ်ရရှိနိုင်ပါတယ်။ “ထိုသူကိုလက်ခံသမျှသောသူတည်းဟူသော ကိုယ်တော်ကိုယုံကြည်သောသူတို့အား၊ ဘုရားသခင်၏သားဖြစ်ရသောအခွင့်ကို ပေးတော်မူ၏။”၂၃ ကျနော်တို့ ဘုရားဆီကိုပြန်လာနိုင်တာဟာ ယေရှုခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်ပါတယ်။ ယေရှုက “ငါသည် လမ်းခရီးဖြစ်၏။ သမ္မာတရားလည်းဖြစ်၏။ အသက်လည်းဖြစ်၏။ ငါ့ကိုအမှီမပြုလျှင် အဘယ်သူမျှ ခမည်းတော်ထံသို့ မရောက်ရ။”၂၄ လို့ ပြောပါတယ်။ ယေရှုက ကမ်းလှမ်းနေပါတယ်- “ငါသည် တံခါးရှေ့မှာရပ်၍ ခေါက်လျက်နေ၏။ အကြင်သူသည် ငါ၏အသံကိုကြား၍ တံခါးကိုဖွင့်အံ့၊ ထိုသူရှိရာသို့ ငါဝင်.. မည်။”၂၅
အခုပင် ဘုရားသခင်ကို သင့်အသက်တာထဲဝင်လာဖို့ ဖိတ်ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကိုဆုတောင်းခြင်းအားဖြင့် ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဆုတောင်းတယ်ဆိုတာ ဘုရားသခင်နဲ့ ပွင့်လင်းမှန်ကန်စွာစကားပြောခြင်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုချိန်လေးမှာကို ဒီလိုဆုတောင်းချက်ပုံစံအတိုင်း ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ဘုရားကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုနိုင်ပါတယ်-
“ဘုရားသခင်၊ ကျွန်တော်/ကျွန်မနှလုံးသားထဲမှာ ကိုယ်တော့်ထံကနေ ထွက်ပြေးခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒါကို ကျွန်တော်/ကျွန်မ ပြုပြင်ချင်ပါတယ်။ ကိုယ်တော့်ကိုသိလိုပါတယ်။ ယေရှုခရစ်တော်နဲ့ သူ့ရဲ့ခွင့်လွှတ်ခြင်းတရားကို ကျွန်တော်/ကျွန်မဘဝထဲမှာ ခံယူချင်ပါတယ်။ ကိုယ်တော့်ထံကနေ နောက်ထပ်မဝေးကွာချင်တော့ပါဘူး။ ယနေ့မှစပြီး ကျွန်တော်/ကျွန်မဘဝရဲ့အရှင်သခင်ဖြစ်တော်မူပါ။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဘုရားသခင်။”
ဘုရားကို အခုပဲ သင့်အသက်တာထဲဝင်လာဖို့ အမှန်တကယ်ခေါ်ဖိတ်ပြီးပြီလား? ခေါ်ဖိတ်ပြီးပြီဆိုရင် မျှော်လင့်စရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဘုရားသခင်က သူ့ကိုသိရှိခြင်းအားဖြင့် သင့်လက်ရှိဘဝမှာ ပိုမိုကြီးမားသောကျေနပ်အားရခြင်းကိုပေးမယ်လို့ ကတိပြုပါတယ်။၂၆ ကဲ- ဘုရားသခင်ဘယ်မှာလဲ? သူက သင့်အသက်တာထဲမှာစိုးစံမယ်လို့ ကတိပေးပါတယ်။၂၇ ပြီးတော့ သင့်အား ထာဝရအသက်ကို ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။၂၈
သင့်ဝန်းကျင်ကမ္ဘာမှာ ဘာပဲဖြစ်နေဖြစ်နေ ဘုရားသခင်ဟာ သင့်အတွက်အမြဲရှိနေပါတယ်။ လူတွေက ဘုရားရဲ့ နည်းလမ်းအတိုင်း မလိုက်လျှောက်ကြပေမယ့် ဘုရားက ကြောက်မက်တုန်လှုပ်ဖွယ်အဖြစ်အပျက်တွေကို ထိန်းချုပ်စီရင်ပြီး သူ့အကြံအစည်တော်ကိုပြည့်စုံစေနိုင်ပါတယ်။ ဘုရားသခင်ဟာ ကမ္ဘာ့အဖြစ်အပျက်တွေကို အစိုးရစွာ ထိန်းချုပ်နေပါတယ်။ သင်ဟာ ဘုရားသခင်ပိုင်ဆိုင်တဲ့သူမှန်ရင် “ဘုရားသခင်ကိုချစ်သောသူ တည်းဟူသော ကြံစည်တော်မူခြင်းအတိုင်း ခေါ်တော်မူသောသူတို့၏အကျိုးကို ခပ်သိမ်းသောအရာတို့သည် တညီတညွှတ်တည်းပြုစုကြသည်ကို ငါတို့သိကြ၏။”၂၉ ဆိုတဲ့ သူကတိတော်ကို စိတ်ချတည်မှီနိုင်ပါတယ်။
ယေရှုခရစ်တော်က “ငြိမ်သက်ခြင်းကို သင်တို့၌ ငါထားခဲ့၏။ ငါ၏ငြိမ်သက်ခြင်းကို သင်တို့အားငါပေး၏။ လောကီသားတို့ ပေးသကဲသို့ ငါပေးသည်မဟုတ်။ သင်တို့စိတ်နှလုံးပူပန်ခြင်း၊ စိုးရိမ်တုန်လှုပ်ခြင်း မရှိစေနှင့်။”၃၀ လို့ ပြောပါတယ်။ သူက သင့်ကိုမစွန့်ဘူး၊ အလျှင်းပစ်မထားဘူးလို့ ကတိတော်ရှိပါတယ်။၃၁
ဘုရားသခင်အကြောင်းနဲ့ သင့်အတွက်သူ့ရဲ့အလိုတော်အကြောင်း ပိုမိုသိရှိဖို့ရန် သမ္မာကျမ်းစာထဲမှ ရှင်မဿဲခရစ်ဝင်၊ ရှင်မာကုခရစ်ဝင်၊ ရှင်လုကာခရစ်ဝင်နဲ့ ရှင်ယောဟန်ခရစ်ဝင်ကျမ်းတို့ကို ဖတ်ရှုပါ။
(၁) ဟေရှာယ ၄၆း၉ (၂) ဆာလံ ၄၆း၁ (၃) ယေရမိ ၂၉း၁၃ (၄) ကောရိ န္တု ဒု-စောင် ၄း၈-၉ (၅) နာဟုံ ၁းရ (၆) ဆာလံ ၁၄၅း၁၈-၁၉ (၇) ရှင်မဿဲ ၁ဝး၂၉-၃၁ (၈) ကမ္ဘာဦး ၁း၁၄ (၉) ဆာလံ ၄ရး၈ (၁၀) ယေရမိ ၃၂း၂၇ (၁၁) ဟေရှာယ ၄၆း၁၁ (၁၂) ယာကုပ် ၄း၆ (၁၃) ဟေရှာယ ၅၃း၆ (၁၄) ရှင်ယောဟန် ၃း၁၆-၁၇ (၁၅) ရှင်ယောဟန် ပ-စောင် ၃း၁၆ (၁၆) ရောမ ၆း၂၃ (၁၇) ရှင်ယောဟန် ပ-စောင် ၅း၁၁-၁၂ (၁၈) ဒေသနာ ၃း၁၁ (၁၉) ဗျာဒိတ် ၂၁း၄ (၂၀) ဗျာဒိတ် ၂၁း၂၇။ ကောရိ န္တု ၁၅း၂၈ (၂၁) ဆာလံ ၃၄း၈ (၂၂) ရှင်ယောဟန် ၁၄း၂၇ (၂၃) ရှင်ယောဟန် ၁း၁၂ (၂၄) ရှင်ယောဟန် ၁၄း၆ (၂၅) ဗျာဒိတ် ၃း၂၀